Filtrer les éléments par date : lundi, 13 juillet 2020
lundi, 13 juillet 2020 19:15
Fanafihana mitam-basy: Jiolahy miisa efatra maty voatifitry ny Polisy
Teo ampiomanana hanatanteraka fanafihana teny Ilafy Avaradrano teny ireto andian-jiolahy ireto androany alatsinainy 13 jolay, no sarona rehefa nojokoin’ny Polisy taorian’ny angom-baovao azon’izy ireo. Nisy ny fifampitifirana ka maty ny efatra tamin’ireo jiolahy, nisy iray tafatsoaka.
Voatonona ho tompon’antoka amin’ireo fanafihana « cash-point » sy fanafihana mitam-piadiana nisesy teto an-drenivohitra, izay nahafatesana olona, ireto andian-jiolahy ireto.
lundi, 13 juillet 2020 19:10
Fanadinam-panjakana: Nivoaka ny daty samihafa
Nambaran’ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fandaharana tao amin’ny haino aman-jery ny alin’ny 12 jolay 2020 ireo daty hanatanterahana ny fanadinam-panjakana, ary nohamafisin’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, ny Fampianarana ara-Teknika sy arak'Asa.
Tsy mbola misy resaka kosa ny taom-pianarana sy ireo fanadinana eny anivon’ny anjerimanontolo miankina amin’ny fanjakana.
Berija Ravelomanantsoa: Voasambotra ireo nitaky ny hamoahana am-ponja azy
Nisy andian’olona nametraka sakana, nandoro kodiarana teo amin’ny « 3 chemins » Ambohipo Antananarivo, androany tokony ho tamin’ny 8ora sy sasany. Mitaky ny hamoahana am-ponja an’i Berija Ravelomanantsoa no antsoantso nataon’izy ireo, niaraka tamin’ny sorabaventy sy tsoka kiririoka.
Noravan’ny Polisy ny sakana, nisy voasambotra tamin’ireo mpanao fihetsiketsehana.